क्युशुको कुमामोतो सहरमा रहेको उकी क्षेत्र | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > EVENT > क्युशुको कुमामोतो सहरमा रहेको उकी क्षेत्र
क्युशुको कुमामोतो सहरमा रहेको उकी क्षेत्र मानिसको भिडभाड बाट निकै टाढा छ। यो ठाउ जापानी सातोयामा अवधारणा जसको अर्थ प्रकृति सबै भन्दा सुन्दर हो भन्ने कुरालाई पुस्टि गर्दछ। आश्चर्यजनक प्रकृति परिदृश्य र घटना देखि समृद्ध इतिहास र संस्कृति, र तपाईले विश्वास गर्न सक्ने अनौंठो फोटो स्पटहरु जुन साँच्चिकै वास्तविक हुन्। यहाँ १० उत्तम स्थानहरू आज तपाइँलाई बताउनेछु।
ओकोशिकिखाईगान समुद्र तट जापानको १०० उत्तम सूर्यास्तहरू र १०० उत्तम समुद्र तटहरूको रूपमा छानिएको एक शानदार दृश्य अबलोकन ठाउँ हो। समुद्री किनारको त्यस्तो सुन्दर दृश्य हेर्न सम्राट केइकुउले आफ्नो “ओकोशी”, एउटा पोर्टेबल तीर्थयात्रा रोकेपछि यो कथा समुद्रको किनारमा एउटा लोककथाको रूपमा राखिएको हो।
जापानमा आरिआके समुद्री सबैभन्दा ठूलो ज्वारको भिन्नता छ। कम ज्वारभाईमा, अर्धचन्द्राकार आकारका ढाँचाहरू सतहमा माथि आउँछन् र लगभग अविश्वसनीय दृश्य सिर्जना गर्दछ।
दिनको समयमा, साँझ र रातीमा, समुद्र सुन्तलादेखि निलोमा रंगीएको हुन्छ। विशेष गरी कम ज्वार र सूर्यास्तको संयोजनको जादुई घडीमा, ल्यान्डस्केपले तपाईंको सास टाढा लैजानेछ। धेरै फोटोग्राफरहरू यो शानदार दृश्य हेर्न आउँदछन् जुन एक बर्षमा मात्र केहि पटक देख्न सकिन्छ।
यहाँ कम ज्वार र सूर्यास्तको संयोजनको लागि उत्तम मितिहरू छन्:
※ मिति (सूर्यास्त समय)
आरीआके सागरमा अवस्थित, सानो तावारेजिमा टापु क्योटोमा पहिले नै प्रख्यात थियो, त्यो समय जापानको केन्द्र क्योटो थियो। प्रख्यात जापानी शास्त्रीय साहित्यहरूमा जस्तै “द पिलो बुक अफ सेई शोनागन” र “टेल्स अफ इसे” टावरिजिमा उल्लेख गरिएको छ, यो पुष्टि भएको थियो कि यो त्यतिबेला पनि महत्त्वपूर्ण स्थान थियो।
सुमियोशी नेचर पार्क तावारेजिमा को लागी एक महान दृश्य स्थल र सूर्यास्त पीछा गर्ने फोटोग्राफरहरूको लागि एक रमणीय ठाउँ हो। यदि तपाइँ जूनमा जानुहुन्छ भने हाइड्रान्जा फूलहरुले भरिएको देख्नु हुनेछ, तर यो ठाउ जुन मात्र नभएर वर्ष सुन्दर छ।यस पार्कमा सुश्री क्याथलिन मेरी ड्रू-बेकर “ब्रिटिश फाइकोलोजिस्ट”को स्मारक छ, पारफ़ाईरा खेतीकी आमाको रूपमा उनको उपलब्धिको प्रशंसा गर्न रखिएको हो। उटो शहर पोरफ़ाईरा समुद्री शैवाल खेतीका लागि परिचित छ। प्रत्येक अप्रिलमा, पार्कले सुश्री क्याथलीनको सम्मानमा ड्रु फेस्टिवल राख्दछ। जापान र युके बीचको मित्रता आजको दिनसम्म प्रगाढ हुँदै गइरहेको छ। उदाहरणका लागि, स्थानीय मानिसहरूले रग्बी विश्व कप २०१९ को बेला वेल्स राष्ट्रिय रग्बी टोलीका लागि समुद्री शैवाल ल्याएका थिए।
टनेल भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा गोलो आकारहरू हाम्रो दिमागमा आउँछन्। तर यहाँ मिसातोमाचीमा, तपाईले “हाचीकाकू टनेल” (शाब्दिक अष्टभुजाको सुरुङ्ग) भन्ने रहस्यमय अष्टभुज सुरुंग फेला पार्न सक्नुहुनेछ। के हो त यस्तो रहस्य। यो टनेल १९६४ मा चल्न छोडेको यूएन रेलवेको अवशेष हो जुन रेलमार्गको दुबै पट्टि पहिरो रोक्नको लागि निर्माण गरिएको हो। यसको अनौंठो आकार र रेलमार्गको वरिपरि विशेष वातावरणको साथ, यो हालसालै एक लोकप्रिय फोटो स्थान भएको छ।
फुटपाथ (फुतामाता ब्रिज कोर्स) को साथ पैदल यात्रा सिफारिश गरिएको छ कि तपाईं हिंड्न को लागी ढुंगा पुल र प्रसिद्ध हाचिकाकु सुरुंगमा हिंड्न सक्नुहुन्छ, अन्ततः एक तातो पोखरीमा आराम गरि आफ्नो हाईक अन्त्य गर्न सक्नु हुनेछ।
मिसातोमाचीसँग फुतातामा पुल भन्ने असामान्य पुल छ जुन सूर्यको प्रकाशले ठ्याक्कै हिर्काउँदा सुन्दर हृदय आकार बनाउन सक्छ। यस पत्थर पुलको घाम र सिल्हूट नदीको सतहमा सुन्दर हृदय आकार दिन्छ। यसले दम्पतीहरूको लागि रोमान्टिक तस्बिर बनाउँदछ, र यसलाई “प्रेमीहरूको लागि मक्का” को रूपमा लिइन्छ जहाले धेरै विवाह प्रस्तावहरू गरेका छ।
अक्टुबर देखि फेब्रुअरी सम्मको घाममा मात्र दिउँसो यस बहुमूल्य मुटुको झलक पाउन सक्नुहुनेछ। त्यहि भएर आफ्नो यात्राको योजना राम्ररी गर्न निश्चित हुनुहोस्।
मिसुमी वेस्ट पोर्ट
सन् १८८७ मा फेरि खोलिएको, मिसूमी वेस्ट पोर्ट जापानमा पहिलो पूर्ण विकसित बन्दरगाह सुविधा हो र विश्व सांस्कृतिक सम्पदा साइटको रूपमा दर्ता गरिएको छ। १३२ वर्ष पछि, चिनाई पियर जस्ता सबै सुविधाहरू अझै १९ औं शताब्दीमा भएझैं अझै यथावत् छन्, यसलाई एक प्रामाणिक ऐतिहासिक स्थल बनाउँदै। घाट नजिकै, ऐतिहासिक पूर्व समुद्री गोदाम (क्यू मिसुमी काइनु सोको) अब एउटा क्याफेमा सुधार गरिएको छ जहाँ तपाईं कफी वा स्वादिष्ट खाना प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, यस ठाउँको गहिरो इतिहास थप बोनस बन्नेछ।
शिरानुइ सी फ़ाईर पर्व
(“Shiranui Uminohi Matsuri”) निकै रमाइलो छ।
यस चाडको गहिरो परम्परागत र धार्मिक जरा छ, मशाल प्रज्ज्वलित जुलुस र समुद्रमा जलिरहेको काँड जस्ता प्रतीकात्मक रीति रिवाजको साथ, समुद्रको किनारमा ताइको जापानी ड्रमको आवाज सहित हेर्न सकिन्छ।
यो टोरी गेटमा भव्य समुद्री आतिशबाजी गरिन्छ जुन माथि को चित्र जस्तो देखिन्छ।
तपाईंले निश्चित रूपमा यस चाडमा जापानी इतिहास, परम्परा र रोमान्स महसुस गर्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ बर्षको फरक समयमा जाँदै हुनुहुन्छ, पानीमा तोरी गेट हेर्न मनमोहक छ।
उतो जिजो फेस्टिभल
उतो सिटीले अगस्टमा “उतो जिजो फेस्टिवल” आयोजना गर्दछ, जुन बच्चाहरूको अभिभावक देवतालाई समर्पित थियो। यो प्राचीन कालदेखि पूजा भइरहेको छ।
सजाइएको जिजो मूर्तिहरु बाहेक, स्थानीयहरु दैनिक वस्तुहरु चुकुरिमोनो कलात्मक वस्तुहरु दैनिक वस्तुहरु। जनावरहरूदेखि भवनहरूसम्म, हस्तनिर्मित वस्तुहरूको किसिमहरू शपिंग आर्केडमा प्रदर्शित हुनेछन्। रातमा, संगीत प्रदर्शन र आतिशबाजी हुनेछ। यदि यस क्षेत्रमा यात्रा गरिरहनु भएको छ भने, “उतो जिजो फेस्टिवल” स्थानीय मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने राम्रो मौका हो।
उतो लाईओन डान्स
के तपाईंले “Shishimai”, जसलाई सिंह नृत्य पनि भनिन्छ सुन्नुभएको छ? यो धेरै परम्परागत जापानी रीतिहरू मध्ये एक हो, दुष्टात्मालाई रोक्न र प्रशस्त फसलको लागि प्रार्थना गर्न गरिन्छ। यो हेर्नको लागि सबैभन्दा रमाइलो परम्परागत चाडहरू मध्ये एक हो! शताब्दीयौं देखि सिंहहरू पवित्र जनावर र देव दुवैको रूपमा आराधना गर्दै आएका छन्। २७० वर्षको इतिहासको साथमा उतो लाईअन नृत्य, अक्टुबर १९ मा वार्षिक रूपमा आयोजित गरिन्छ।
यो भनिन्छ कि शिशिमईले उनीहरूको टाउकोमा टोक्ने हो भने बच्चाहरू बुद्धिमान् र स्वस्थ हुन्छन्, यसैले धेरै परिवारहरू आफ्ना बच्चाहरूसहित यस चाडमा आउँछन् – शिशीमाई नजिकै आएको कारण धेरै साना बच्चाहरू रोइरहेका देखिन्छ। यो निश्चित रूपमा रंगीन, जीवन्त र रमाईलो घटना हो।
मीसाका प्रोमेनेड एंड दाइओनक्योजी शाकाईन मन्दिर
पहाडको टुप्पोमा बनेको १२०० वर्ष पुरानो दाइओनक्योजी शाकाईन मन्दिरमा पुग्न तपाईंले ३३३३ खुड्किलाको ढुंगे भर्याङ्ग चढ्नुपर्नेछ, र त्यो जापानमा रेकर्ड नम्बरको चरण हो। यो पूर्ण रूपमा हेर्न लायक छ।
यी ढुंगा जापानी ग्रानाइट मात्र नभएर चीन, कोरिया, भारत, रसिया, ब्राजील, उत्तरी अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाबाट आएका सामग्रीहरू पनि निर्माण गरिएको थियो – यसले अन्तर्राष्ट्रिय सोचलाई दर्शाउँछ।
एकै चोटी ३३३३ खुड्किलो चढ्न गारो हुने भएकोले आराम गर्दै चढ्नु होला।